Nitohy ny andron’ny alahady 24 janoary ny fitsidihana tamin’ny fomba ofisialy ataon’ny Filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina, ao Toamasina. 25 janvier 2021
Porofo izao rehetra izao fa mikatsaka lalandava ny soa ho an’ny vahoaka malagasy ny Fitondram-panjakana tarihin’ny Filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina.
“Mila manatsara ny tolotra omeny ny Jirama”
Ny 15 isan-jaton’ny mponina eto Madagasikara ihany no manana herinaratra amin’izao fotoana. Fanamby nataon’ny Filoha kosa ny hampiakarana izany hatramin’ny 40 isan-jato hatramin’ny 50 san-jato. « Ny fampiasantsika ny angovo azo havaozina no zava-dehibe indrindra ary io ankehitriny no tena imasoan’ny Fitondram-panjakana », hoy izy.
Nokianin’ny Filoha mafy kosa ny mahakasika ny jiro sy rano tapaka lava. Nambarany fa efa misy tompon’andraikitra napetraka amin’ireny ka raha jiro sy rano tsy mahafa-po ny mpanjifa no atolotra dia tsy handroso ny Firenena. « Nomen’ Andriamanitra, rano, rivotra ary masoandro mibaliaka isika. Ny fahaizantsika manodina an’ireo hahasoa ny mpiara-belona no isehoan’ny fahaiza-mitantana », hoy ny nambarany. Mampihena ny hofan’ny fanodinana ny milina ampisain’ny Jirama amin’izao fotoana ny angovo azo havaozina, hoy ny Filoha. Io mantsy hatramin’izay no nampidi-trosa be ho an’ity orinasa ity, ka tsy nahafahany nivoatra sy namaly ny filàn’ny mpanjifa. « Ialantsika io satria orinasa vitsy no mahazo tombony amin’izany saingy ny vahoaka dia migoka ny mafy hatrany. Tsy maintsy havaozina sy ovaina izany fomba fiasa izany ary izay no iantsoana ny orinasa rehetra afaka mamokatra herinaratra avy amin’ny masoandro », hoy hatrany Filoha.
Nanome toromarika hentitra ho an’ny orinasa Jirama ihany koa ny Filoha mikasika ny fampidinana ny saran’ny jiro sy rano. "Mila manatsara ny tolotra omeny ny Jirama. Mila tsinjovina ny fahefa-mividin’ny vahoaka. Herinaratra ho an’ny rehetra amin’ny vidiny mirary no tanjona. Ny Jirama dia orinasam-panjakana ary natao hiasa ho an’ny vahoaka, tsy azo ekena raha ratsy izany. Rano tapaka, jiro tapatapaka nefa ny faktiora midangana zato isan-jato ; tsy izany no ilain’ny vahoaka ny Jirama », hoy izy. Nanterin’ny Filoha koa fa vao avy nandalo covid-19 isika eto Madagasikara izao, mihena avokoa ny fidiram-bolan’ny isan-tokantrano ka tsy ho afaka hanefa faktiora lafo sy midangana.
Fampidiran-jiro sarotra sy tsy manara-dalàna